Endoscope Kushambidza & Disinfection
Diki Steam Sterilizers (Autoclaves)
Pakati Pakati Steam Sterilizers (Autoclaves)
Yakadzika Kupisa Sterilizers
Kurongedza & Sterilization Nzvimbo
Sterile Kuchengetedza Nzvimbo
Kurapa Mhepo Disinfector
Wepakati Ceiling Pendant
Radiation Uye Kuongorora Zvirongwa
Nyoro Bhegi Fomu-Zadza-Chisimbiso (FFS) Solution
Bhodhoro repurasitiki ISBM Solution
Furidzira-Zadza-Chisimbiso (BFS) mhinduro
Kusunungura-yakaomeswa poda SVP mhinduro
Solid chipimo chemushonga Solution
Kushandisa michina System
Mhuka Kunwa Mvura Kurapa
Biological Kudzivirira Cabinet
Yakakwira Energy Medical Electro ...
Dzakasimudzwa Zvimiro: ■ Matatu X-ray (6MV, 10MV uye 15MV) uye akawanda maelectron ...
Otomatiki Door Spray Washer
Chigadzirwa Zvimiro ■ Yakanakisa kamuri dhizaini uye maitiro Iyo conical kamuri muS ...
Otomatiki Zvichienderana Endoscop ...
High kunyatsoshanda kugeza Mutasvi otomatiki endoscope pesin anogona kupedza th ...
Zvimiro ■ Oral mwenje Iyo tembiricha tembiricha inogona kugadziridzwa uye ine maviri illumi ...
RXY Series Geza-Sterilize-F ...
Overview Vial tsananguro: 1ml-100ml Output chinzvimbo: 10-500 ndiro / miniti F ...
Zvoga tireyi Carrier Ultr ...
Tafura yetafura sterilizer MOST-T (...
Zvimiro ■ Kuchenesa kwakaringana Vhura mhando yemvura tangi ine bvisika kavha inogadzira ...
YKX.P Kurapa Plasma Mhepo Pu ...
Zvimiro ■ Modular dhizaini inoita kuti kugadzirisa kuve nyore. ■ 3-giredhi kumhanyisa sarudza ...
YKX.Z Ultraviolet Mhepo Inonatsa
Basa musimboti: UV mwenje + firita. UV mwenje inoparadza microorganisms protein ...
WAIVA Series Ampoule Water St ...
Mhedziso Seye yega yenyika R&D nzvimbo ye disinfection & steriliza ...
Chigadzirwa Nhanganyaya BDS-H akateedzana eiyo diffusional hydrogen peroxide disinfecto ...
Zvimiro Zvinopa akasiyana zvigadzirwa zvigadzirwa kune hombe mhuka, uye inogona p ...
Yakapfava bhegi iri yoga
Chigadzirwa sumo BSE-IS dzakateedzana mbeva uye gonzo rakapfava bhegi rinosarudzika ndeye ...
Chigadzirwa sumo Iyo huku yekuzvimiririra BSE-l yakanaka uye isina kusimba pressu ...
BWS-M-G360 otomatiki drinki ...
Iyo isina kuchena mvura inorapwa nerabhoritari mhuka yekumwa mvura yekudzivirira syst ...
WAIVA Series Ampoule Mvura Sterilizer
Sezvo iri yega yenyika R & D nzvimbo yekuuraya hutachiona & yekudzivirira michina, SHINVA ndiyo huru yekunyora unit yenyika uye indasitiri chiyero chemidziyo yekudzivirira. Zvino SHINVA ndiyo hombe yekugadzira hwaro hwekuvharisa uye michina yekuuraya hutachiona munyika. SHINVA yapfuura advertising pamusoro ISO9001, CE, ASME uye kumanikidzwa mudziyo utariri hurongwa.
RXY Series Shamba-Sterilize-Zadza-Seal Line
Vial Wash-Dry-Zadza-Seal Kugadzira Mutsetse unoshandiswa kushambidza, sterilization, kuzadza nekuisa chisimbiso kweiyo diki vhoriyamu vial jekiseni mumusangano. Iyo inoratidzira yemhando dhizaini, inonzwisisika dhizaini, yakakwira degree of otomatiki, yakatsiga uye yakavimbika mashandiro, yakakwira kugadzirwa kushanda uye mehendi uye magetsi kusangana. Izvo zvikamu zvinosangana nemushonga wemvura zvinogadzirwa neAISI316L uye imwe yacho inogadzirwa neAISI304. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa hazvina kusvibiswa pane zvinodhaka uye nharaunda.
PSMR Series Super-inopisa Mvura Sterilizer
Anokwanisa zvinhu: Nyanzvi yekuvhiya robhoti ruoko.
RXY Series Fomu-Zadza-Chisimbiso Mutsetse
Isiri-PVC bhegi fomu-yekuzadza-chisimbiso mutsetse (FFS Line) inoumbwa nebhegi rinoumba chikamu, yekuzadza-yekuisa chiteshi, chengetedza kabati uye laminar yakabhururuka hood. Isiri-PVC Fomu-Zadza-Chisimbiso Machine. Kuyerera chati seinotevera: Kudhinda pane firimu → Bhegi inoumba → Port Welding → Bhegi ichitamisa → kuzadza
ECOJET Series jekiseni Kuumbwa & Inovhuvhuta system
Muchina unonyanya kushandiswa kugadzira bhodhoro risina chinhu kubva kuPP granule. Kusanganisira jekiseni richigadzirisa Machine uye Bottle Ridzai Machine.
SSL Series Wash-Zadza-Chisimbiso muchina
Mushini unonyanya kushandiswa pakushambidza, kuzadza nekuisa chisimbiso chePP bhodhoro. Iyo inokodzera kupisa chisimbiso kwemubatanidzwa cap, inosanganisira ion mhepo yekuwacha unit, WFI yekuwacha unit, nguva-yekumanikidza yekuzadza unit, yekuisa chisimbiso yuniti / capping unit.
Manual Door Spray Washer
Rapid-M-320 inyanzvi yezvehupfumi musuwo washer-disinfector iyo yakatsvaga nekuvandudza zvinoenderana nezvinodiwa nezvipatara zvidiki kana institution. Basa rayo uye kuwacha zvinobatika zvakaenzana neRapid-A-520. Iyo zvakare inogona kushandiswa kuisa disinfection yezvokuvhiya zviridzwa, zvigadzirwa, zvekurapa matayi uye mahwendefa, anesthesia zviridzwa uye nemakoroma hoses muchipatara CSSD kana yekuvhiya imba.
Negative Kumanikidza Washers
SHINVA Yekutarisa Sisitimu yeLumen Kushambidza Mhedzisiro
■ Kushambidza maitiro ekuyedza nzira
Pulse yekugezesa kusuka kwakasiyana nekupfapfaidza kuwacha, inotora iyo nyowani basa musimboti kugadzirisa ese marudzi ese akaoma zviridzwa zvine yakawanda groove, giya uye lumen Kuti uwane kusimbiswa kwesainzi kweiyo yekushambidza mhedzisiro, SHINVA inosvitsa yakatarwa yekuwacha mhedzisiro yekutarisa mhinduro zvinoenderana nezvinhu:
PSMP Series Super-inopisa Mvura Sterilizer
GP Series Yekushandisa system
Otomatiki system inosanganiswa ne otomatiki kutakura uye otomatiki kurodha emhando dzakasiyana infusion, tireyi otomatiki kutakura uye otomatiki kudzikisa mushure mekuvharisa, inova chizvarwa chazvino chemishonga yemishonga.
Iyo yakafara yewasher-disinfector inongori 1200mm iyo inopa kuisirwa kumisikidza uye yakanyanyisa kudzikisira mari uye nguva yekumisikidza.
PBM Series BFS Muchina
Plastiki bhodhoro-yekuzadza-chisimbiso muchina unotora iyo yekurova-zadza-chisimbiso (pano BFS) yakasanganiswa tekinoroji, inova nzira yekugadzirwa kwepurasitiki yekurongedza infusion kugadzirwa. Nhatu-mu-imwe aseptic yekuzadza muchina unoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwepurasitiki yekupaka zvigadzirwa zveiyo terminal sterization, zvigadzirwa zveaseptic, nezvimwewo. Haisi chete yakakodzera kugadzirwa kwakawanda kwezvigadzirwa, asi zvakare ine yakanaka aseptic kugadzikana, yakaderera muchinjika-kusvibisa mukana , yakaderera kugadzirwa uye manejimendi mutengo.
123456 Inotevera> >> Peji 1/16
Shinva: Kutarisa paPamusoro-mhando Dzekusimudzira
Runhare: +86 533 3587720